ပုဂံဘုရားမှာ ရုပ်သံရိုက်ကူးပြီး ညစ်ညမ်းဝဘ်ဆိုဒ်မှာတင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသားစုံတွဲကို စုံစမ်းနေ - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ပုဂံဘုရားမှာ ရုပ်သံရိုက်ကူးပြီး ညစ်ညမ်းဝဘ်ဆိုဒ်မှာတင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသားစုံတွဲကို စုံစမ်းနေ
ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမှာ ဘုရားစေတီပေါင်း ၃ထောင်ကျော်ရှိ
မြန်မာ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေဖြစ်တဲ့ ပုဂံဇုန်အတွင်းမှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားစုံတွဲရဲ့ ညစ်ညမ်းရုပ်သံမှတ်တမ်းတစ်ခု အွန်လိုင်းမှာပျံ့နှံ့နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ စုံစမ်း မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ ရှေးဟောင်း သုတေသနဌာန၊ ပုဂံဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်အောင်ကျော် ကဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ပုဂံဘုရားတွေထဲက ဘုရားအမှတ် ၁၅၅၄ ရှေ့မှာရိုက်ကူးထားတဲ့ အဆိုပါရုပ်သံဖိုင်ဟာ ညစ်ညမ်းဝဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုမှာလည်း တင်ထားတယ်လို့သိရပြီး လူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲသူတွေ မြန်မာတွေကြားမှာလည်း မြန်မာ့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမှာ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။
'' အဲဒါက ဘယ်တုံးကလုပ်တာလဲ ဘယ်သူလဲဆိုတာ အတိအကျသိဖို့လိုပါတယ်။ ချက်ခြင်းကတော့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါက အီတလီကလို့လည်းပြောတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်ကလို့လည်း ပြောကြတယ်။ ပြန်ပြီးတော့ လေ့လာနေတုံးပဲ ရက်တိုအတွင်းသိဖို့တော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူး'' လို့ ပုဂံဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်အောင်ကျော်က ပြောပြပါတယ်။
ဒီညစ်ညမ်းရုပ်သံဟာ လတ်တလောရိုက်ကူးထားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို ပုဂံဒေသခံ ဦးခင်မောင်နုကလည်းသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။
'' ဒီဥစ္စာက ဒီဓာတ်ပုံကိုကြည့်လိုက်တေ့ လတ်တလောဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အနားမှာ ပြောင်းခင်းတွေ ရှိနေတယ်။ ခန့်မှန်းချေ ၁၁ လပိုင်း ၁၂ပိုင်းဝန်းကျင်မှာပဲရှိလိမ့်မယ်။ အခုက ပြောင်းခင်းတွေက မရှိတော့ ဘူး။ ရိတ်ပြီးနေပြီ။ ပုဂံက ဘုရားပေါင်း ၃ထောင်ကျော်လောက်ရှိနေတာဆိုတော့ ဒေသခံတွေကလည်း ဘုရားပေါင်းအားလုံးကို ရောက်ဖို့ခဲယဉ်းတယ်။''လို့ ဦးခင်မောင်နုက ပြောပြပါတယ်.
ဒါပေမယ့်လည်း အခုလို ဘာသာတရားရဲ့အထွတ်အမြတ်ထားရာ ဘုရားအနီးမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒါဟာ စက်ဆုပ်ရွံရှာစရာလုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ဒေသခံအများစုကြားမှာလည်း ဒေါသထွက် စိတ်ကောင်း ဖြစ်နေကြရတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
ပုဂံဒေသဟာ မြန်မာ့ရှေးဟောင်းနယ်မြေအဖြစ်သာမက ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းသတ်မှတ်ထားရာနေရာလည်းဖြစ်တာကြောင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ ဦးခင်မောင်နုကပြောပါတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်သံကို ပုဂံဘုရားအမှတ်ကိုပါ မြင်သာအောင်ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားခဲ့
' ' အရေးယူဖို့ဆိုတာကတော့ နိုင်ငံခြားသားပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူဆိုတာသိရင် အရေးယူလိုက်လို့ရတယ်။ အခုက ဟိုတယ်တည်းခိုခန်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ စုံစမ်းနေပါတယ်။ ဘယ်သူတွေဆိုတာ သိရဖို့ကို အရင်လိုက်စုံစမ်းနေပါတယ်။ မသိတဲ့အခါကြတော့ဘယ်လိုအရေးယူမလဲ'' လို့ အရေးယူနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေကို ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာန၊ ပုဂံဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်အောင်ကျော်ကရှင်းပြပါတယ်။
ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာမသိသေးပေမယ့်လည်း ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရေးယူမှုတစ်ခုကတော့ လုပ်ကို လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ ပုဂံဒေသခံ ဦးခင်မောင်နုကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်။
'' ဒီတိုင်းထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးလို့ မြင်တယ်။ ဒီနိုင်ငံသားက ဘယ်နိုင်ငံကလဲ သိပြီဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးကတဆင့် ဆက်သွယ်ပြီး ဒီဗီဒီယိုကို လိုင်းပေါ်ကဖြုတ်ချဖို့ရယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အက်ရှင်တစ်ခု ယူဖို့လို တယ်။ ရွံစရာလည်းကောင်းတယ်။ နိုင်ငံတကာကိုလည်း ပျံ့ သွားတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက် နဲ့လုပ်သွားလဲပေါ့။ ဒေသခံတွေကတော့ ဒေါသထွက်ရုံပဲ။အဓိကက အာဏာပိုင်တွေအပိုင်းက အက်ရှင်ယူ ဖို့လိုတယ်''လို့ သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြပါတယ်။
ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေဟာ ဘုရားစေတီပေါင်း ၃ထောင်ကျော်ရှိပြီး ကျေးရွာပေါင်း ၄၂ ရွာကျော် ရောယှက်နေထိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘုရားတစ်ဆူချင်းစီကို စောင့်ကြည့်တာမျိုး၊ အစောင့်ချတာ စီစီတီဗွီ(စောင့်ကြည့်ကင်မရာ) တပ်ဆင်တာမျိုးတွေကို မလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့လည်း ဦးအောင်အောင်ကျော်ကပြောပြပါတယ်။
ပုဂံဘုရားမှာ ရုပျသံရိုကျကူးပွီး ညဈညမျးဝဘျဆိုဒျမှာတငျခဲ့တဲ့ နိုငျငံခွားသားစုံတှဲကို စုံစမျးနေ
Image caption ပုဂံရှေးဟောငျးယဉျကြေးမှုနယျမွမှော ဘုရားစတေီပေါငျး ၃ထောငျကြျောရှိ
မွနျမာ့ရှေးဟောငျးယဉျကြေးမှုနယျမွဖွေဈတဲ့ ပုဂံဇုနျအတှငျးမှာ ရိုကျကူးထားတဲ့ နိုငျငံခွားသားစုံတှဲရဲ့ ညဈညမျးရုပျသံမှတျတမျးတဈခု အှနျလိုငျးမှာပြံ့နှံ့နတောနဲ့ပတျသကျပွီး အရေးယူဆောငျရှကျနိုငျဖို့ စုံစမျး မှုတှပွေုလုပျနတေယျလို့ ရှေးဟောငျး သုတသေနဌာန၊ ပုဂံဌာနခှဲ ညှနျကွားရေးမှူး ဦးအောငျအောငျကြျော ကဘီဘီစီကို ပွောပါတယျ။
ပုဂံဘုရားတှထေဲက ဘုရားအမှတျ ၁၅၅၄ ရှမှေ့ာရိုကျကူးထားတဲ့ အဆိုပါရုပျသံဖိုငျဟာ ညဈညမျးဝဘျဆိုဒျ တဈခုမှာလညျး တငျထားတယျလို့သိရပွီး လူမှုကှနျရကျသုံးစှဲသူတှေ မွနျမာတှကွေားမှာလညျး မွနျမာ့ ရှေးဟောငျးယဉျကြေးမှုနယျမွမှော ရိုကျကူးထားတာဖွဈလို့ ဝဖေနျပွောဆိုမှုတှရှေိနပေါတယျ။
'' အဲဒါက ဘယျတုံးကလုပျတာလဲ ဘယျသူလဲဆိုတာ အတိအကသြိဖို့လိုပါတယျ။ ခကျြခွငျးကတော့ ဘယျလိုမှမဖွဈနိုငျဘူး။ ဒါက အီတလီကလို့လညျးပွောတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈလလောကျကလို့လညျး ပွောကွတယျ။ ပွနျပွီးတော့ လလေ့ာနတေုံးပဲ ရကျတိုအတှငျးသိဖို့တော့မဖွဈနိုငျသေးဘူး'' လို့ ပုဂံဌာနခှဲ ညှနျကွားရေးမှူး ဦးအောငျအောငျကြျောက ပွောပွပါတယျ။
ဒီညဈညမျးရုပျသံဟာ လတျတလောရိုကျကူးထားတာမဖွဈနိုငျဘူးဆိုတဲ့အခကျြကို ပုဂံဒသေခံ ဦးခငျမောငျနုကလညျးသုံးသပျပွောဆိုပါတယျ။
'' ဒီဥစ်စာက ဒီဓာတျပုံကိုကွညျ့လိုကျတေ့ လတျတလောဖွဈတာတော့မဟုတျဘူး။အနားမှာ ပွောငျးခငျးတှေ ရှိနတေယျ။ ခနျ့မှနျးခြေ ၁၁ လပိုငျး ၁၂ပိုငျးဝနျးကငျြမှာပဲရှိလိမျ့မယျ။ အခုက ပွောငျးခငျးတှကေ မရှိတော့ ဘူး။ ရိတျပွီးနပွေီ။ ပုဂံက ဘုရားပေါငျး ၃ထောငျကြျောလောကျရှိနတောဆိုတော့ ဒသေခံတှကေလညျး ဘုရားပေါငျးအားလုံးကို ရောကျဖို့ခဲယဉျးတယျ။''လို့ ဦးခငျမောငျနုက ပွောပွပါတယျ.
ဒါပမေယျ့လညျး အခုလို ဘာသာတရားရဲ့အထှတျအမွတျထားရာ ဘုရားအနီးမှာ ရိုကျကူးခဲ့တာဖွဈတဲ့ အတှကျ ဒါဟာ စကျဆုပျရှံရှာစရာလုပျရပျဖွဈပွီး ဒသေခံအမြားစုကွားမှာလညျး ဒေါသထှကျ စိတျကောငျး ဖွဈနကွေရတယျလို့ သူကပွောပါတယျ။
ပုဂံဒသေဟာ မွနျမာ့ရှေးဟောငျးနယျမွအေဖွဈသာမက ကမ်ဘာ့ရှေးဟောငျးယဉျကြေးမှုအမှအေနှဈအဖွဈ ထိနျးသိမျးသတျမှတျထားရာနရောလညျးဖွဈတာကွောငျ့ အရေးယူဆောငျရှကျမှုတော့လုပျဖို့လိုတယျလို့ ဦးခငျမောငျနုကပွောပါတယျ။
Image caption ညဈညမျးရုပျသံကို ပုဂံဘုရားအမှတျကိုပါ မွငျသာအောငျထညျ့သှငျးရိုကျကူးထားခဲ့
' ' အရေးယူဖို့ဆိုတာကတော့ နိုငျငံခွားသားပဲဖွဈဖွဈ နိုငျငံသားပဲဖွဈဖွဈ ဘယျသူဆိုတာသိရငျ အရေးယူလိုကျလို့ရတယျ။ အခုက ဟိုတယျတညျးခိုခနျးတှကေိုလိုကျပွီးတော့ စုံစမျးနပေါတယျ။ ဘယျသူတှဆေိုတာ သိရဖို့ကို အရငျလိုကျစုံစမျးနပေါတယျ။ မသိတဲ့အခါကွတော့ဘယျလိုအရေးယူမလဲ'' လို့ အရေးယူနိုငျဖို့ ဆောငျရှကျနတေဲ့အခွအေနကေို ရှေးဟောငျးသုတသေနဌာန၊ ပုဂံဌာနခှဲ ညှနျကွားရေးမှူး ဦးအောငျအောငျကြျောကရှငျးပွပါတယျ။
ဘယျသူဘယျဝါဆိုတာမသိသေးပမေယျ့လညျး ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး အရေးယူမှုတဈခုကတော့ လုပျကို လုပျဖို့လိုတယျလို့ ပုဂံဒသေခံ ဦးခငျမောငျနုကသူ့ရဲ့အမွငျကိုပွောပါတယျ။
'' ဒီတိုငျးထားလို့တော့မဖွဈဘူးလို့ မွငျတယျ။ ဒီနိုငျငံသားက ဘယျနိုငျငံကလဲ သိပွီဆိုရငျ သကျဆိုငျရာ သံရုံးကတဆငျ့ ဆကျသှယျပွီး ဒီဗီဒီယိုကို လိုငျးပျေါကဖွုတျခဖြို့ရယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ အကျရှငျတဈခု ယူဖို့လို တယျ။ ရှံစရာလညျးကောငျးတယျ။ နိုငျငံတကာကိုလညျး ပြံ့ သှားတယျဆိုတော့ ဘယျလိုရညျရှယျခကျြ နဲ့လုပျသှားလဲပေါ့။ ဒသေခံတှကေတော့ ဒေါသထှကျရုံပဲ။အဓိကက အာဏာပိုငျတှအေပိုငျးက အကျရှငျယူ ဖို့လိုတယျ''လို့ သူ့ရဲ့အမွငျကိုပွောပွပါတယျ။
ပုဂံရှေးဟောငျးယဉျကြေးမှုနယျမွဟော ဘုရားစတေီပေါငျး ၃ထောငျကြျောရှိပွီး ကြေးရှာပေါငျး ၄၂ ရှာကြျော ရောယှကျနထေိုငျတဲ့နရောဖွဈတဲ့အတှကျ ဘုရားတဈဆူခငျြးစီကို စောငျ့ကွညျ့တာမြိုး၊ အစောငျ့ခတြာ စီစီတီဗှီ(စောငျ့ကွညျ့ကငျမရာ) တပျဆငျတာမြိုးတှကေို မလုပျနိုငျတဲ့အနအေထားဖွဈတယျလို့လညျး ဦးအောငျအောငျကြျောကပွောပွပါတယျ။